Sida loo isticmaalo Netflix VR iyo maxaad ka heli doontaa? | Forum Mobile
Sida loo isticmaalo Netflix VR iyo maxaad ka heli doontaa?
Daniel Terrasa | 15/11/2021 14:07 | Internet
Waxaa jira hab aad si buuxda ugu raaxaysato oo aad ula kulanto dhammaan waxyaabaha xiisaha leh ee ku jira madal Netflix oo leh xoojin weyn. Dhammaan mahadnaqa farsamada dhabta ah ee dhabta ah. Waxaan sharaxnaa waxa ay tahay Netflix VR iyo wax kasta oo ay siiso isticmaaleyaasheeda.
Dhammaanteen waan ognahay in Netflix uu yahay mid ka mid ah aaladaha VOD ee ugu weyn adduunka (fiidiyowga baahida loo qabo). Sidoo kale mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan. Hadda waxay sidoo kale na siinaysaa ikhtiyaarka ah inaan ku raaxaysanno dhammaan waxa ku jira xaqiiqada dhabta ah.
Xaqiiqdu waxay tahay, ilaa maantadan la joogo, Netflix ma laha codsi daawade VR gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira fursado badan, sida helitaanka "Netflix Virtual Lounge" ama isticmaal qaar ka mid ah barnaamijyada dibadda.
1 Maxaan u baahan nahay?
2 Sida loo daawado Netflix VR
2.1 Qalabka Android
2.2 Netflix VR ee iPhone
3 Waxyaabaha ku jira Netflix VR
Maxaan u baahan nahay?
Dabcan, shuruudaha ugu horreeya oo lagama maarmaanka ah si aad u daawato Netflix oo leh xaqiiqda dhabta ah waa in la yeesho rukhsad firfircoon. Nooca is-diiwaangelinta ayaa ah kan ugu yar, midkoodna wuu u qalmi doonaa. Waxa kale oo lagama maarmaan noqon doonta in la haysto moobil ama qalab ku habboon farsamada VR, sida muraayadaha Oculus Quest ama la mid ah. Aan mid mid u aragno shuruudahan:
Muraayadaha VR: Waxaa jira noocyo badan oo laga heli karo suuqa, oo leh qiimo badan oo kala duwan. Mid ka mid ah kuwa ugu jaban waa Oculus Quest 2, oo hore loo sheegay, kaas oo lagu iibiyo qiyaastii 350 euro. Doorashooyinka ugu qaalisan waxaa ka mid ah tusaale ahaan muraayadaha dhabta ah ee HTC Vive Pro Eye, kuwaas oo qiimihiisu ka sarreeyo 1.300 euro (*).
casriga, haddii ay suurtogal tahay Android.
Isku xirka WiFi xasilloon, maadaama Netflix VR app (sida dhammaan nidaamyada dhabta ah ee dhabta ah) ma ogola soo dejinta iyo kaydinta waxyaabaha ku jira daawashada offline.
Ku biiritaanka firfircoon ee Netflix: Haddii aad tahay isticmaale madal, waxaad hore u ogaan doontaa inay jiraan saddex nooc oo is-diiwaangelin ah iyadoo ku xiran tirada aaladaha aad rabto inaad adeegsato adeegga iyo go'aanka aad dooratay muujinta qeexitaan sare iyo haddii kale:
Si aad u daawato barnaamijyo, taxane iyo filimaan aan xadidnayn hal qalab isku mar (7,99 euros).
Si aad u aragto waxa ku jira laba shaashad isku mar iyo tayada HD (€ 11,99).
Ugu dambeyntii, si loo kordhiyo tirada shaashadaha ilaa afar + HD (15,99 euro).
(*) Waxaa jira beddelaad ka jaban, inkastoo ay tayadoodu hooseeyso, sida Daawashada kartoonada Google, kaas oo lagu iibsan karo 10 euro oo kaliya.
Sida loo daawado Netflix VR
Hoos waxaan ku falanqeyneynaa seddexda hab ee ugu fudud uguna badan ee la isticmaalo si aan ugu raaxaysano nuxurka Netflix xaqiiqada dhabta ah oo aad ugu raaxaysato khibrad cusub oo asal ah:
Netflix VR App ee Google Play
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo si aad ugu raaxaysato khibradan dhabta ah ee dhabta ah ee casriga ah ama qalab kasta oo kale oo Android ah kala soo bax Netflix VR app Google Play.
Marka codsigu ceeb la'aan yahay, si aad u isticmaasho, fur, dooro ikhtiyaarka "Dooro Headset-ka" oo dhagsii aaladaha diyaarka u ah daawashada (mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee Daydream View). Dariiqa kale ee lagu galo abka waa in la iska sawiro koodhka QR ee aaladaha kale halkaasna ka gal akoonkeena Netflix.
Waayo-aragnimada daawashada ayaa ina tusi doonta sida qol fadhi raaxo leh oo lagu rakibay muraayad weyn, fadhi weyn iyo daaqado waaweyn oo aad ka arki karto muuqaal qurux badan oo baraf ah. Si sax ah sida ka muuqata sawirka sare ee boostada. Haddii aad doorbidayso inaad tirtirto qaabkan immersive, kaliya waa inaad ka baxdaa «qaabka qolka fadhiga» oo dooro «habka madhan».
Muraayadaha Daydream View waa aaladda rasmiga ah ee Google ee xaqiiqada dhabta ah.
riyo maalmeed waa madal xaqiiqada dhabta ah ee Google. Isticmaalayaashu waxay leeyihiin codsi gaar ah oo loo yaqaan Netflix VR.
Taleefannada gacanta ee ku qalabaysan taageerada Daydream waxay mar hore la yimaadeen barnaamijka Netflix VR ee warshaddu soo dejisay. Dabcan, si aad u isticmaasho waxa aad u baahan doontaa in aad soo iibsato daydream VR viewer la jaan qaada Google Pixel iyo aaladaha kale ee moobaylka. Waxaa jira fursado badan oo suuqa ah, oo qiimahoodu aad u kala duwan yahay. Mid aad loogu taliyay ayaa ah Muraayadaha Dayream View (sawirka), qalabka «guriga», kaas oo qiimaha iibkiisu ku saabsan yahay 109 euro.
Waa in la ogaadaa in qalabkani yahay daawashada rasmiga ah ee Google ee xaqiiqada dhabta ah ee Android. Waxay u taagan tahay fududaynta isticmaalka, iyo sidoo kale la jaanqaadkeeda codsiyada iyo ciyaaraha badan. Waxaa jira, si kastaba ha ahaatee, noocyo kale oo badan oo muraayadaha VR ah oo mudan in la xuso:
BNEXTVR, ku habboon Android iyo iOS labadaba. Alaab qiimo sare leh oo lacag ah, oo lagu iibinayo ilaa 30 euro.
VRSShark X6, oo ay soo saartay astaanta caanka ah ee HiShock. Doorashada ugu jaban: waxay ku kacayaan qiyaastii 50 euro.
Quest Oculus 2. Mid ka mid ah moodooyinka muraayadaha dhabta ah ee ugu habboon ee bixiya tayada sare. qiimihiisu waa ku dhawaad ​​€349.
Haddii aan isticmaalno moodooyinka muraayadaha VR ee tayadoodu hooseyso, waxaa laga yaabaa inaan helno qaar dhibaatooyinka fiiqan ee sawirka. Waxaa jira khiyaamo yar oo tan lagu hagaajinayo: waa inaad si fudud u gasho qaabeynta IPD oo aad u beddeshaa 600.
Netflix VR ee iPhone
Waxaad sidoo kale ku raaxaysan kartaa Netflix VR iPhone
In kasta oo geeddi-socodku uu ka yara adag yahay, haddana waxaan sidoo kale ku raaxaysan karnaa khibradda immersive ee Netflix VR ee iPhone iyo iPad. Caqabadda ugu weyn ee ku saabsan Android (halka aan ku hayno xalka Daydream) waa in aysan jirin app gaar ah Ma jiro codsi gaar ah oo loogu talagalay xaqiiqada dhabta ah ee iOS.
Habka loo isticmaalo xaaladahan waa in la isticmaalo shaqada gudbinta sawirada. Sidan, qaabka dhabta ah ee dhabta ah ayaa loo dooran karaa si loogu gudbiyo nuxurka su'aasha ee software-ka Windows ee kumbuyuutarkayaga iyo shaashadda qalabkayada Apple. Waxaa jira qaar ka mid ah alaabooyinka software aad u xiiso badan si loo fuliyo gudbintan. Waxaa ka mid ah, laba ka mid ah: Trinus VR y VR-Streamer
Marka, si aad u hesho Netflix VR iPhone-kaaga, tallaabada ugu horreysa waa inaad soo dejiso mid ka mid ah codsiyadan kumbuyuutarkayaga iyo sidoo kale nooca iOS ee iPhone ama iPad-kayaga. Kahor intaanan sii wadin waa inaan hubinaa in kumbuyuutarka iyo iPhone-ka labadaba ay ku xiran yihiin shabakad isku mid ah WiFi.
Si loo xidho labada nooc ee app-ka, IP-ga talefanka waxa la galaa abka talefanka ka dibna waxa lagu bilaabayaa labada qalabba. Kadib waxaan galeynaa shabakada Netflix ee kumbuyuutarka oo gal akoonkeena. Marka tan la sameeyo, waxa hadhay oo dhan waa in la doorto nuxurka aan rabno oo aan bilowno u gudbinta in our iPhone.
Trinus VR waa mid ka mid ah codsiyada ugu fiican ee laga soo daayo Netflix VR ee iPhone ka PC
Mararka qaarkood tayada gudbinta waxyaalahaas iPhone ma aha sida wanaagsan sida aan rabno. Nasiib wanaag, waxaa jira hab lagu hagaajiyo, iyadoo la rakibayo fur-in la yiraahdo tracker furan. Qalabkan waxa uu la shaqeeyaa VR-Streamer oo bixiya macluumaadka ku saabsan dareemayaasha iPhone-keena.
Sidee loo sameeyaa isku xidhkan? Waa nidaam aad u fudud: marka hore waa in aan rakibnaa codsi cusub oo ku xiran oo la yiraahdo VR-Streamer Server. Dhinaca kale, waxaan ku rakibi doonaa Opentracker on iPhone.
Markaa, marka laga bilaabo VR-Streamer Server-ka kombuyuutarkeena, waxaan raadin doonaa ikhtiyaarka "habraaca Notepad" ee liiska soo muuqda. Way fiican tahay in la badbaadiyo goobaha si looga fogaado in la sameeyo habkan mar kasta oo aan rabno inaan daawano Netflix VR. Marka xigta, waxaanu kicinaynaa VR-Streamer iPhone oo guji "Connect to server" ikhtiyaarka, sidaas darteed dhamaystirka xiriirka ka dhexeeya kombiyuutarka iyo iPhone.
Ugu dambeyntii, waxa kaliya oo hadhay in lagu xiro muraayadaha ama muraayadaha VR ee iPhone wax walbana waxay diyaar u yihiin inay bilaabaan raaxaysi.
Waxyaabaha ku jira Netflix VR
Farsamada dhabta ah ee dhabta ah, oo si sii kordheysa ugu jirta nolosheenna
Netflix waxay siisaa isticmaaleyaasheeda adduunka oo dhan buug-gacmeedyo ballaadhan oo kala duwan oo leh in ka badan 2.000 oo cinwaan, filimaan badan iyo taxane korriin joogto ah. Dhammaan waxyaalahan ayaa sidoo kale lagu heli karaa qaabka dhabta ah ee dhabta ah oo leh lakabyo cusub oo is dhexgal ah.
Qaadashada tillaabadan, Netflix way qabsatay, oo ku simay adeegyadeeda kuwa aaladaha kale ee tartanka ku jira sida HBO, oo hormuud u ahaa bixinta waxyaabaha VR.
Waa run in tignoolajiyada la xidhiidha xaqiiqada dhabta ah ay wali ku jirto heerarkeedii hore. Waxaa jira waddo dheer oo loo maro iyo dhinacyo badan oo lagu liilin karo oo la hagaajin karo. Qaybta farsamada waxaa jira caqabado lagu xallinayo, sida ka fogaanshaha kulaylka qalabka iyo ka gudubka xaddidaadaha ku habboonaanta, iwm. Si kastaba ha ahaatee, maalin kasta waxaa jira horumarro cusub oo xal loogu raadinayo dhibaatooyinkan iyo kuwa kale. Waxaan hubaa in muddo aad u yar gudaheed aan arki doono isbedel weyn.
Dhab ahaantii, marxaladaha muhiimka ah waa in mar hore la muujiyaa, sida suurtogalnimada in lagu daawado Netflix VR content ee casriga ah, sida aan ku sharaxnay qaybihii hore. Hirgelinta tignoolajiyadani waa mid gaabis ah, laakiin lama dhaafi karo. Xaqiiqda dhabta ah, ilaa hadda si ficil ahaan ku xaddidan adduunka ciyaaraha, waxay qayb ka noqon doontaa nolol maalmeedkeena dhowr sano gudahood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Internet » Sida loo isticmaalo Netflix VR iyo maxaad ka heli doontaa?
Waa maxay furaha Shift maxaase loogu talagalay?